Interview with Dawud Ibsa – Benegerachin lay Part 2 – Ayyaantuu
HomeAmharicInterview with Dawud Ibsa – Benegerachin lay Part 2
Interview with Dawud Ibsa – Benegerachin lay Part 2 – ደረጀ ኃይሌ ከኦቦ ዳውድ ኢብሳ ጋር ክፍል 2 – Benegerachin lay Part 2
ደረጀ ኃይሌ ከኦቦ ዳውድ ኢብሳ ጋር – Benegerachin lay Part 1
#Waa ‘ee #Hayyu_duree_ABO_Daawud_Ibsaa kana beektuu?
Kaleessa sirni awwaalchaa haadha hayyuu duree ABO Obbo Daawud Ibsaa raawwatee ture.
Obbo Daawud Ibsaa eenyu? Gabaasa keenya duraanii keessaati.
Daawud Ibsaa Ayyaanaa bara 1999 irraa hanga tibbana karaa nagaa qabsoo gaggeessuf mootummaarra waamicha dhiyaateef simatanii gara biyyaatti deebi’anitti hayyuu duree ABO tahuun tajaajilaa turan.
Daawud Ibsaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq ammaa ona Abuuna jedhamtu keessatti dhalatanii guddatan.
Barnoota sadarkaa jalqabaa Magaalaa Shaambuutti erga baratanii booda barnoota sadarkaa lammaffaaf gara Finfinnee deemuun mana barumsaa Jeneraal Wiingeetitti barataa turan.
Jeneral Wiinget keessattis barataa cimaa akka turan hiriyyaansaanii Mana barumsaa Wiingetii eegaluun hanga qabsoo hidhannootti waliin turan Dr. Dagafaa Abdiisaa Tuuchoo BBC’tti himaniiru.
Daawud Ibsaa bara 1970 hanga 1971tti Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsitii Haayilesillaasee I jedhamuun beekamu galuun osoo barataa jiranii mormii barattootaa yeroo sana finiinaa turetti makamuun qabsoo gochaa akka turan himama.
Achittis waldaa baratoota Oromoo jedhamutti makamuun Haayilesillasee mormuu itti fufan.
Bara 1974-1976tti ammo duula ‘Idget be hibret’jedhamutti makamuun hawwaasa tajaajilaa tureera.
Bara 1973 Addi Bilisummaa Oromoo cunqursaa bara dhibbaa uummata keenyarraa kaasuu qabnu jechuun magaalaa Finfinnee keessatti akka hundeeffame Dr Dagafaan dubbatu.
Yeroo sana adda durummaan akka Baaroo Tumsaa, Qees Guddinaa Tumsaa, Jaarra Abbaa Gadaa, Leencoo Lataa, Diimaa Nagoo fi Magarsaa Bariifaa namoota ABO hundeessan turani jedhu Dr. Dagafaan.
As keessatti baratoonni Yuunivarsiitii Oromoo hedduun hirmaataa akka turan Dr. Dagafaan BBC’tti himaniiru.
Daawud Ibsaas isaan keessaa isa tokko ture jedhu.
Bara 1977 akka duula ‘Idget be hibret’ irraa deebi’een Daawud miseensa Koree Giddu Galeessaa ABO tahuun filataman.
Haa tahu malee yeroo sana taayitaarra kan ture mootummaan Dargii hanga bara 1979tti waggota lamaaf mana hidhaa galche.
Akkuma mana hidharraa bahaniin bara 1979 -1980tti gara Yuunivarsiitii Finfinneetti deebi’uun barnoota Istaatiksii itti fufe.
Haa tahu malee qabsoon karaa hidhannoo jalqabame cimee akka itti fufuuf barnoota Istaatiksii wagga Arfaffaa irraa addaan kutuun bara 1980 leenjii waraanaaf gara Sudaan imalan.
Leenjii waraanaa boodas gara lixa Oromiyaa Wallaggaatti deebi’uun qabsoo itti fufan.
Bara 1981 ji’oota muraasaaf gara Eertiraa deemuun leenjii waraanaa dabalataa fudhatanii ajajaa waraanaa ABO lixaa tahuun qabsoo hidhannoo mootummaa Dargii irratti jalqaban itti fufan.
Mootummaan Dargii waraanni kallattii hedduun waan irratti cimeef tarkaanfii hamaa fudhachuuf Oppireeshini gaggeessuu jalqabe jedhu Dr. Dagafaan.
Haala Kanaan bakka loltoonni ABO buufatanii fi nyaatan qorachuun wallaga Lixaa naanno Begiitti dhiyoo jirtu tokkotti summii nyaatatti makuun akka kennamuuf taasisan jedhu.
Yaadichi kan nama yeroo sana naannoo Begii fi Gidaamii bulchaa tureeti jedhu.
Namni summii akka kennuuf dirqisiifame loltoota sagal Daawud Ibsaan hogganu keessaa obboleessa isa tokkooti jedhu.
Daawud Ibsaa akkuma xiqqoo nyaataniin nama eegumsarra jirurraa dabaree fuudhee akka ol galee nyaatu taasise jedhu hiriyyaan Daawud Dr. Dagafaan.
Namootni torba bakkuma tokkotti yerooma sana yommuu du’an, isaan baala waanuma arge nyaatanii dabalataan namootni bishaan obaasuun akka lubbuun oolan Obbo Daawud BBC’tti himaniiru.
Guyyaa sana Tottobaa Waaqwayyaa Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo jaha, Yohaannis Dinqaa Yunivarsiitii Haramaayaa, Adam Mahaammad fi Suleyman Mahammad, Taaddasaa Shorroo kan jedhaman namootni torba bakka Sonkaa jedhamtutti akka dhuman Obbo Daawud ni dubbatu.
Yeroo sana qondaaltotni mootummaa Dargii odeeffannoo irraa arganna jechuun hospitaala Dambidoolloo galchuun erga yaalsisanii booda magaalaa Finfinnee mana hidhaa karchallee jedhamutti galchuun achitti darara guddaa irraan gahan jedhan Dr. Dagafaan.
Kun bara 1981 A.L.A yoo tahu hanga bara 1986tti mana hidhaa Karchallee turuun deeggarsa obbolaan haadha warraa Leencoo Lataa aadde Kuwee Kumsaa taasisaniin mana hidhaatii miliquun ammas waraana ABOtti makamani jedhu.
Daawud bara 1988 irra deebiin koree gidduu galeessaa fi hojii raawwachiistuu ABOtti filamuun hanga 1991tti kutaa waraanaa ABO hogganaa turan.
Booda erga wal dhabdeen bara mootummaa ce’umsaa uumamee ammas gara qabsoo hidhannootti deebi’uun Eertira buufata waraanaa godhachuun qabsoo itti fufan.
Bara 1999 Hayyu Duree ABO tahuun filamuun hanga guyyaa karaa nagaa jilasaanii guutuu waliin biyyatti deebi’anitti hidhannoodhaan qabsoo gaggeessaa turaniiru.
Fulbaana 15 bara 2018 jilli ABO guutuun biyya alaa jiru gara biyyaatti deebi’uun uummata miiliyoonotaan simannaan tasifameeraaf.
Daawud Ibsaa harmee isaanii waggaa 36 booda yommuu ijaan argan.
Maddi BBC News Afaan Oromoo
Link Irraa Kan Walitti Sassaabee Dursaa O Abaadir
List of names , addresses , pictures and other related identifying detailed informations of each of these members of house of Federation need to be released to the public on social and other form of medias.
Recent survey revealed currently most Ethiopians do not even know the name and do not recognize the face of even one member of Ethiopia’s house of federation besides those members of TPLF or Abiy’s cabinet.